‘मोबाइल इन्टरनेट’को स्पीड भारतमा भन्दा नेपालमा बढी - dsnews
‘मोबाइल इन्टरनेट’को स्पीड भारतमा भन्दा नेपालमा बढी
भारतमा भन्दा नेपालमा मोबाइल इन्टरनेटको स्पीड बढी देखिएको छ। स्पीड टेष्टले गरेको ग्लोवल टेष्ट २०१७ मा मोबाइलमा इन्टरनेट स्पीड भारतमा भन्दा नेपालमा बढी देखिएको हो । नेपाल ग्लोवल टेष्टको ९९ औं स्थानमा छ भने भारत १ सय ९ स्थानमा छ।
नेपालमा मोबाइल इन्टरनेट १० दशमलव ९७ एमबीपीएसको स्पीडमा चल्छ भारतमा भने ८ दशमलव ८ शुन्य एमवीपीएसको गतीमा इन्टरनेट चल्ने गरेको सो सर्वेक्षणले देखाएको छ। भारतमा भन्दा नेपालमा मोबाइल इन्टरनेट तिब्र गतिमा चलेपनि यो अन्य देशहरुको तुलनामा सुस्त गतिमा चल्ने इन्टरनेट चल्ने देशहरुको सुचीमा नेपाल छ।
मोबाइल इन्टरनेट सबैभन्दा बढी नर्वेमा छ। नर्वेमा ६२ दशमलव ६६ एमबीपीएसका दरले मोबाइलमा इन्टरनेट चल्छ।ब्रोडब्याण्डमा भने नेपाल इन्टरनेट कम चल्ने देशहरुको सुचीमा छ। नेपालमा इन्टरनेट कम चल्ने देशहरुको ९२ औं स्थानमा छ। पहिलो देशमा सिंगापुर छ।
Previous अब ब्याक्टेरियाले चार्ज गर्छ ब्याट्री
Next एउटा फोनमा दुई फेसबुक एकाउन्ट कसरी खोल्ने ?
क्वालकोमको पक्षमा चिनियाँ अदालत, आदेशविरुद्ध एप्पलको अपिल
मंगल ग्रहबारेका १० रोचक तथ्यहरु
विश्वभर निःशुल्क वाईफाई
चीनको अर्को चमत्कार ! कृत्रिम चन्द्रमा पछि सुर्य निर्माण थाल्यो [तस्विर हेर्नुहोस्]